Ny tantarantsika - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Miasa ho an'ny
Fampidirana Rain'i Xinzi
Ao amin'ny Xinzi Rain, ny mpamoron-tsaintsika rehetra dia nandinika matetika mba hamoronana fisiana mahafinaritra toy ny hoe mandika majika, mandika tsara ny sary masina rehetra ary mampiditra hery ara-panahy ao anaty taratasy ary manandrana manao azy ireo ho lasa tena izy.
Fisiana tsara tarehy
Ao amin'ny Xinzi Rain, ny bra rehetra noforonina tsara dia asan'ny zavakanto kokoa noho ny bra.
Ny singa Xinzi Rain custom tsirairay dia mitaky fizotran'ny torolàlana maro samihafa manomboka amin'ny famolavolana drafitra ka hatramin'ny zaitra, amin'ny fampiasana fitaovana samihafa sy milina matihanina hamitana izany.
Ny sasany amin'ireo brosy avo lenta na be pitsiny aza dia mandany fotoana be fotsiny amin'ny fanjairana. Na fanaovana takelaka na zaitra, dia tena tsara tarehy ilay asa-tanana.
Xinzi Rain dia mamaritra ny hatsarana izay anananao, mahatakatra ny eritreritra sy ny takian'ny vehivavy tsirairay izay tia hatsaran-tarehy
Ny dingana manjaitra rehetra dia mitaky teknika tena marina. Ao ambadiky ny akanjo anatiny Xinzi Rain misy famaritana avo dia asan'ny mpanao asa-tanana tsirairay.
Ny fanjaitra sy kofehy dia asa tanana iray manontolo. Ireo mpandrafitra dia manohy mandova ny fahaiza-manao ambony amin'ny fanjairana atin'akanjo, manaraka ny endriny tsy miova amin'ny marika, ary manjaitra atin'akanjo atin'akanjo avo lenta toy ny firavaka.
Mandray ny votoatin'ny kantony ary maneho izany, ary mitondra tanjaka ho an'ny vehivavy rehetra manao atin'akanjo Xinzi Rain, mamaky tampoka ary manova ny heriko manokana, miaraka amin'ity fahefana ity handroso am-pitiavana.